Heloka bevava any Dubai sy ny fitsarana heloka bevava | Ny heloka bevava any Dubai sy ny fitsarana heloka bevava
Ny heloka bevava any Dubai sy ny fitsarana heloka bevava
Rafitry ny lalàna mifehy ny heloka bevava any Emirà Arabo Mitambatra
Lalànan'ny heloka bevava UAE
Ny lalàna heloka bevava an'ny Emira Arabo Mitambatra (UAE) dia namboarina indrindra taorian'ny lalàna Sharia, izay fitsipi-pitondran-tena sy lalàna ara-pinoana Silamo. Ny lalàna Sharia dia miresaka momba ny raharaha toaka, filokana, firaisana ara-nofo, heloka bevava amin'ny akanjo, fanambadiana, ary olana hafa. Ny fitsarana any Dubai dia mampihatra ny lalàna Sharia na inona na inona zom-pirenena na fivavahan'ny antoko eo alohany. Midika izany fa ny Fitsarana any Dubai dia manaiky sy mampihatra ny lalàna Sharia ho an'ny vahiny na tsy Silamo izay mandika ny lalàn'i Dubai.
Araka izany, zava-dehibe ho an'ny mponina ao amin'ny firenena, ny mponina, ny vahiny ary ny mpizahatany ny mahafantatra ireo lalàna sy lalàna mifehy azy ireo. Ny fahalalana tsara ny lalàna heloka bevava dia manome antoka fa tsy manitsakitsaka lalàna na lalàna ianao ary miaritra ny vokany. Ny tsy fahalalana ny lalàna dia tsy fialan-tsiny velively eo anatrehan'ny Fitsarana.
Ny lalàna momba ny heloka bevava ao Dubai dia mpandala ny nentin-drazana na dia vahiny aza ny ankamaroan'ny mponina. Tsy fahita matetika noho izany ny fitsangatsanganana mpizahatany any Dubai noho ny fihetsika heverin'ny firenena hafa ho tsy manimba sy ara-dalàna.
Ny sazy noho ny heloka bevava ao Dubai dia manomboka amin'ny kapoka ka hatramin'ny fotoan'ny fonja. Mba hisorohana ireo sazy ireo dia mila fanampiana avy amin'ny mpisolovava mpanao heloka bevava izay mahay tsara amin'ny rafi-pitsarana heloka bevava any Dubai ny olona voampanga ho nanao heloka be vava. Ireo mpisolovava mpanao heloka bevava ao amin'ny Mpanolotsaina sy mpisolovava Amal Khamis fantaro ny halehiben'ny fiampangana heloka bevava any UAE. Araka ny mpisolovava mpiaro ny heloka bevava manana fahalalana sy fahaiza-manao izy ireo hanampy amin'ny fiampangana toy izany.
Inona ny heloka bevava any UAE?
Ny heloka bevava any UAE dia fihetsika na tsy fanarahana tsotra izao izay mamorona fandikan-dalàna ary manasazy ny lalànan'ny firenena. Ny famaritana ny heloka bevava dia mitovy amin'ny faritra rehetra. Saingy ny fomba famitana ny heloky ny voampanga dia tsy mitovy amin'ny firenena samy hafa, toy ny sazy mihatra.
Ny heloka bevava dia tsy vitan'ny hoe mandratra ara-batana fotsiny. Izy ireo dia afaka mampiditra fahasimbana ara-bola, ara-pitondrantena ary ara-batana amin'ny zanak'olombelona na fikambanana rehetra. Ny heloka bevava any Dubai dia azo zaraina ho sokajy enina malalaka:
Heloka ara-nofo: fanararaotana ara-nofo tsy ampy taona, fanolanana, fanondranana olona an-tsokosoko, fanorisorenana ara-nofo, fampisehoana tsy mendrika, fivarotan-tena, firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy, ary ny fanehoam-pitiavana ampahibemaso dia anisan'ny heloka bevava ara-nofo ao Dubai.
Heloka an-tserasera: Ny hosoka ara-bola an-tserasera, ny fanorisorenana nomerika, ny hosoka amin'ny Internet, ny halatra maha-izy azy, ny fanodikodinam-bola amin'ny Internet, ny hosoka amin'ny fampiasam-bola an-tserasera ary ny phishing dia tafiditra ao anatin'ny sokajin'ny cybercriminalité avokoa.
Heloka ara-bola: Tafiditra ao amin'ity sokajy ity ny heloka bevava toy ny fanodikodinam-bola, fisolokiana amin'ny carte de crédit, halatra maha-izy, kolikoly sy kolikoly, fanodinkodinam-bola, banky ary hosoka amin'ny fampiasam-bola.
Fandikan-dalàna: Izany dia mitaky fananana sy / na fihinanana zava-mahadomelina, ankoatry ny fandikan-dalàna hafa.
Heloka bevava mahery setra: Ny famonoana olona, ​​famonoana olona, ​​fakana ankeriny, fanafihana ary bateria dia tafiditra ao anatin'io sokajy io.
Heloka bevava hafa: Ity sokajy ity dia misy ny fandikan-dalàna toy ny fivadiham-pinoana, fisotroana alikaola, fanalan-jaza, fanitsakitsahana ny fitafiana, fisakafoanana sy fisotroana ampahibemaso mandritra ny Ramadany, heloka bevava amin'ny fiampangana diso, halatra, sns.
Tahaka ny ahoana ny fizotry ny heloka bevava any Dubai?
Mety ho sarotra ny fomba fiasa amin'ny raharaha heloka bevava any Dubai. Indrindra ho an'ireo vahiny any ivelany. Antony mahatonga izany ny sakana amin'ny fiteny. Antony iray hafa koa ny fananan'i Dubai ny sasany amin'ireo lalàna mifehy ny heloka bevava amin'ny Lalàna Silamo Islamika.
Zava-dehibe ny manamarika fa na iza na iza mandika ny lalànan'ny firenena dia iharan'ny rafi-pitsarana na vahiny na tsia. Tsy afaka miaro azy ireo amin'ny vokatry ny hetsika ny governemanta vahiny iray. Tsy azon'izy ireo atao ihany koa ny mandingana ny fanapahan-kevitry ny manam-pahefana eo an-toerana na mitady fitsaboana tian'izy ireo ho an'ny olom-pireneny.
Na izany aza, hiezaka izy ireo hahita fa tsy hanavahana ny olom-pireneny, holavina ny fitsarana, na hosaziana tsy ho ela.
Ahoana ny fomba hanombohana ny asan-jiolahy any Dubai?
Raha niharan'ny heloka bevava tany Dubai ianao, ny dingana voalohany tokony hatao aorian'ny heloka bevava dia ny fametrahana fitoriana amin'ny polisy amin'ilay meloka. Ao amin'ny fitarainana momba ny heloka bevava dia tsy maintsy tantarainao amin'ny fomba ôfisialy (an-tsoratra) na am-bava (ny polisy hanoratra ny fanambarana am-bava anao amin'ny teny Arabo). Mila manao sonia ilay fanambarana ianao avy eo.
Mariho, tsy maintsy apetrakao any amin'ny paositry ny polisy ny fitoriana momba ny heloka bevava.
Ahoana no andehanan'ny fitsapana heloka bevava?
Rehefa avy nanao ny fanambarana ny mpitory dia nifandray tamin'ilay olona voampanga ny polisy ary naka ny fanambarany. Ity dia ao anatin'ny fizotry ny famotopotorana heloka bevava.
Mandritra io fizotran-javatra io, ny olona voampanga dia mety hampandre ny polisy ny mety ho vavolombelona afaka mijoro vavolombelona manohana azy ireo. Azon'ny polisy atao ny miantso ireo vavolombelona ireo ary mirakitra ny fanambarany.
Avy eo ny polisy dia nanolotra ny fitoriana tany amin'ireo departemanta voakasik'izany (toy ny sampan-draharaha misahana ny heloka bevava elektronika sy ny sampana mpitsabo forensika) tompon'andraikitra amin'ny fandinihana ireo fitarainana.
Raha vantany vao raisin'ireo polisy ny fanambarana rehetra mifandraika amin'izany, dia natolotr'izy ireo tany amin'ny fampanoavana.
Ny fampanoavana ampahibemaso dia fahefana ara-pitsarana manan-kery hitory ny raharaha any amin'ny fitsarana heloka bevava.
Rehefa tonga any amin'ny fampanoavana ny raharaha, dia hampiantsoin'ny mpampanoa lalàna ilay mpitory sy ny voampanga hisolo vava azy ireo. Mety hanana fotoana ny roa tonta hitondra vavolombelona hijoro ho vavolombelona manohana azy eo anatrehan'ny fampanoavana.
Ny mpitantsoratra manampy ny mpampanoa lalàna dia mirakitra ny fanambaràn'ireo antoko amin'ny teny Arabo. Ary mila manao sonia ny fanambarany avy eo ireo antoko.
Raha manapa-kevitra ny mpampanoa lalàna handray io raharaha io dia hampiantsoin'izy ireo ilay olona voampanga hanatrika ny fitsarana heloka bevava mifandraika amin'izany. Ny fampanoavana dia manome ny pitsopitsony amin'ny heloka bevava nampangaina ho voampanga. Etsy ankilany, raha mahatsapa ny fampanoavana fa tsy misy antony hanenjehana ny raharaha dia aroson'izy ireo izany.
Sazy inona avy no azonao antenaina?
Rehefa hitan'ny fitsarana fa meloka ny olona iray voampanga, dia manasazy araka ny lalàna ny sazy. Anisan'izany ireto:
Fahafatesana (sazy lehibe)
Fanagadrana mandrapahafatiny (15 taona no ho miakatra)
Fonja vonjimaika (3 ka hatramin'ny 15 taona)
Fiorenana (1 ka hatramin'ny 3 taona)
Fitanana (1 volana ka hatramin'ny 1 taona)
Fanamoriana (hatramin'ny kapoka 200)
Ny olona voaheloka iray dia manana 15 andro hampiakarana ny didim-pitsarana meloka. Raha misafidy ny hanao antso avo izy ireo dia mbola hijanona ao am-ponja mandra-piandry ny fotoam-pitsarana.
Rehefa misy didim-pitsarana meloka iray hafa, dia afaka manao fitsarana ambony momba ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ny meloka. Ity fitsarana ambony ity dia any amin'ny fitsarana ambony. Amin'ity dingana ity, ny mpisolovava ny voampanga dia tsy maintsy mampiseho fa ny iray amin'ny fitsarana ambany dia nanao hadisoana rehefa nampihatra ny lalàna izy ireo.
Afaka manova ny sazy am-ponja noho ny fandikan-dalàna madinidinika ny fitsarana ambony. Noho izany, ny heloka kely iray azo saziana enim-bolana eo ho eo na ny onitra dia azo soloina fanompoana eo amin'ny fiarahamonina mandritra ny telo volana.
Azon'ny fitsarana atao koa ny manafatra ny fanovana ny fotoam-pivoriana ho an'ny fiarahamonina ho fanagadrana. Hitranga izany raha toa ka milaza ny mpampanoa lalàna fa tsy nahavita ny andraikiny nandritra ny fotoam-piaraha-monina ny mpandika lalàna.
Ny sazy noho ny fandikan-dalàna Silamo dia mifototra amin'ny jurisprudence Islamika (Sharia). Misy ny sazy antsoina qisas, ary misy diyya. Qisas dia midika famaizana mitovy. Ohatra, maso solon'ny maso. Etsy ankilany, diyya dia tamby fanonerana ny fahafatesan'ny niharam-boina, fantatra amin'ny anarana hoe "vola ra."
Hametraka sazy fanamelohana ho faty ny fitsarana rehefa mampidi-doza ny fiarovana ny fiarahamonina ny heloka bevava iray. Saingy, ny fitsarana dia mahalana no mamoaka ny fanamelohana ho faty. Alohan'ny hahavitan'izy ireo izany dia tsy maintsy hanaiky izany ny tontolon'ny mpitsara telo. Na eo aza izany dia mety tsy hampiharina ny fanamelohana ho faty raha tsy manamafy izany ny filoham-pirenena.
Araka ny lalàna Silamo any Dubai, raha hitan'ny fitsarana fa meloka ho namono olona ny voampanga dia ny fianakavian'ilay niharam-boina ihany no afaka mangataka sazy fanamelohana ho faty. Avela ihany koa izy ireo hanafoana izany zo sy fangatahana izany diyya. Na ny filoham-pirenena aza tsy afaka mitsabaka amin'ny toe-javatra toy izany.
Mila mpisolovava za-draharaha UAE?
Ny fahazoana manao heloka bevava any Dubai dia mety ho mavesatra ihany. Mila mpisolovava mpanao heloka bevava mahay sy manana traikefa amin'ny rafi-pitsarana ady heloka be vava ianao.
At Mpanolotsaina sy mpisolovava Amal Khamis, manana traikefa an-taonany maro izahay amin'ny raharaha heloka bevava. Ny mpisolovava anay sy ny mpanolo-tsaina ara-dalàna dia nahazo traikefa sy fahaiza-manao be dia be tamin'ny fisoloan-tena ireo mpanjifa voampanga ho nanao heloka bevava federaly na fanjakana ao amin'ny firenena. Raha voampanga ho nanao heloka bevava ianao, dia zava-dehibe ny miresaka amin'ny mpisolovava heloka bevava faran'izay haingana.
Raha mila anao izahay hanampy anao amin'ny raharahan'ny asan-jiolahy anao, na mahafantatra olona manao izany ianao, dia potsitra iray monja izahay. Mifandraisa aminay, ary afaka manomboka isika.